ChiKristu Chinoenda Kumarudzi Akawanda | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
ChiKristu Chinoenda Kumarudzi Akawanda
Vaapostora vakateerera murayiro waJesu wekuti vaparadzire mashoko akanaka panyika yese. Muna 47 C.E., hama dzaiva kuAndiyoki dzakatuma Pauro naBhanabhasi kunoparidza. Vaparidzi vaviri ivavo vaishingaira, vakafamba muAsia Minor yese vachisvika kunzvimbo dzakadai seDhebhe, Ristra neIkoniyumu.
Pauro naBhanabhasi vaiparidzira munhu wese, angava mupfumi kana murombo, mukuru kana mudiki. Vanhu vakawanda vakagamuchira chokwadi pamusoro paKristu. Pauro naBhanabhasi pavakaparidzira gavhuna weKupro ainzi Segiyo Paurosi, mumwe muroyi akaedza kuvarambidza. Pauro akaudza muroyi wacho kuti: ‘Jehovha achakuranga.’ Ipapo ipapo, muroyi wacho akabva ava bofu. Gavhuna Paurosi paakaona izvi, akava mutendi.
Pauro naBhanabhasi vaiparidzira kwese kwese, paimba neimba, mumisika, mumigwagwa uye mumasinagogi. Pavakaporesa murume ainge akaremara kuRistra, vanhu vakaona chishamiso chacho vakafunga kuti Pauro naBhanabhasi vaiva vanamwari uye vaitoda kuvanamata. Asi Pauro naBhanabhasi vakavarambidza, vachiti: ‘Namatai Mwari chete! Isu tingoriwo vanhu.’ Vamwe vaJudha vakabva vauya ndokuita kuti boka revanhu ripandukire Pauro. Vanhu vacho vakabva vamutema nematombo, ndokumukwevera kunze kweguta, vachibva vamusiya vachifunga kuti akanga afa. Asi Pauro akanga achiri mupenyu! Hama dzakabva dzauya kuzomubatsira uye dzakamutora ndokudzokera naye muguta. Pauro akazodzokera kuAndiyoki.
Muna 49 C.E., Pauro akaendazve kunoparidza. Apedza kuonana nehama dzaiva muAsia Minor, akatoita kuti mashoko akanaka asvike kure chaizvo, kuEurope. Akaenda kuAtene, Efeso, Firipi, Tesaronika nedzimwewo nzvimbo. Sirasi, Ruka nemukomana ainzi Timoti vakaendawo naPauro. Vakabatsirana pakuumba ungano nekudzisimbisa. Pauro akambogara muKorinde kwegore nehafu, achisimbisa hama dzaiva ikoko. Akaparidza, akadzidzisa uye akanyora tsamba kuungano dzakawanda. Aiitawo basa rekugadzira matende. Nekufamba kwenguva, Pauro akazodzokera kuAndiyoki.
Pava paya muna 52 C.E., Pauro akazoenda zvakare kunoparidza, uye akatangira muAsia Minor. Akaenda kure chaizvo kuchamhembe, ndokusvika kuFiripi uye akazoendawo kuKorinde. Pauro akapedza makore akati kuti ari muEfeso, achidzidzisa, achirapa vanhu uye achibatsira ungano. Aipawo hurukuro dzavose zuva nezuva muimba yepachikoro yaiitirwa mitambo. Vanhu vakawanda vakateerera uye vakasiya zvakaipa. Apedza kuparidza mashoko akanaka munyika dzakawanda, Pauro akazoenda kuJerusarema.
“Saka, endai munoita kuti vanhu vemarudzi ese vave vadzidzi.”​—Mateu 28:19
Mibvunzo: Uchishandisa mepu iri muBhaibheri rako, ungakwanisa here kuona nzendo dzakafambwa naPauro paaiparidza?
MAKADHI EVANHU VOMUBHAIBHERI
Pauro Kadhi reBhaibheri
Pauro aiita basa rei kuti azviriritire? Tarisa kadhi rino reBhaibheri kuti uone zvaaiita.
Kupararira Kwakaita chiKristu
Ona mepu inoratidza nzendo dzaPauro achiparidza mashoko akanaka uye maguta anotaurwa muna Zvakazarurwa.
NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZOKUDZIDZA
Tsungirira Asi Uchifara!
Ona kuti chii chakabatsira Pauro naSirasi kuti varambe vachifara pasinei nokuti vaitambudzwa.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri
Mashoko Akanaka Anopararira
Kuparidza Umambo—Kuparidza Mashoko Akanaka Munyika Yose
Nei Kuine Machechi Akawanda?